BEERTA GERANIUM WILD (DHAR GUDUUDAN OO KALIYA MA AHA): QOYSKA, SHARAXAAD DHEERI AH, SAWIR, NOOCYO OF CRANE GAROONKA (SUMMER SKYE, BLACK BEAUTY, DHIRTA HONEY) - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay geranium cagaaran, sidee ayay uga duwan tahay midka kaynta, maxay u egtahay sida sawirka iyo waa maxay xeerarka beerto?
Geranium qashinka (beerta) ama crane waa geedka dilka ah ee ubaxa ah ee bichromatic ah, aad u dhif ah geedka sanadlaha ah, waa noocyada geranium ee qoyska Geranium.
Marka xigta, waxaad ka ogaan doontaa waxa ay tahay, raadso sharaxaad iyo sawir geedka. Intaa waxaa dheer, waxa uu ka hadlayaa sida dhirta ay u kala duwan tahay germanyum keynta, iyo cudurrada ay saameyn karto.
In geranium cagaaran, afkoda aan la dallacin, ma tiro badan ama xitaa hal, koritaanka toosan, dallad ku leh qaybta sare iyo daboolay timaha duuban ama fog. Maqsinnada Geraniyaanka kaynta ayaa gaadhay heerkul dhan 40-80 cm.
Rizamku waa mid culus laakiin gaaban, dhererkeedu waa 10 cm. Dhirta ayaa leh caleemo tiro badan iyo caleemaha caleemaha asalka ah.
Caleemaha, oo ku yaalay asliga ah, waxay leeyihiin qaab shan-laab ah, halka kuwa sare ay yihiin kuwo sessile ah iyo sadexleey. Noocyo waa lanceolate, dhererkoodu waa qiyaastii 15 mm.
Usheega inflorescence, been-been ah. Ubaxku waa mid aad u ballaadhan, waxay u furan yihiin ballaadhan marka ubax, ubaxyada qiyaastii 20 mm dheer waxay leeyihiin madow-buluug, midab buluug-buluug iyo guduud ah oo casaan ah, oo ku wareegsan dusha sare, oo dhan iyo timirta saldhiga.
Tijaabinta ubaxyada iyo cawska waxay u adeegtaa sida ilaalinta cayayaanka yaryar.
Beerta caleemaha cagaaran ee jimcaha ah June ama July, muddada ubaxku waa 30 maalmood, laan kasta wuxuu ku fidi doonaa wax ka badan 2 maalmood.
Geranium cagaaran waa mid miro badan.
Khudradda miranika cagaaran waa kabac, wuxuu leeyahay qaabka coracoid leh dhererka celcelis ahaan 3-4 cm, ripens ee August-September, ka dib markii ay tuntay abuur ah waa mid aad u yar, macmacaan.
Goobta cagaaran waxaa laga helaa meelaha qoyan ee qoyan, geedaha kaynta qoyan, xuduudaha keynta, waxay koraan oo keliya maaha, laakiin sidoo kale kaymaha dhaadheer, oo ka mid ah duurka.
Caymiska deegaannada cagaaran ee jaadiga ah waa mid ballaadhan: dhulalka Europe, Central Asia, Siberia.
Maganimka la yiraahdo waxaa loo helaa mid la mid ah miro leh gawsaha crane, oo laga tarjumay luqada Giriigga "crane".
Goobta cayriiniga ah waxaa loo adeegsaday sidii dhirta daawada iyo ornamental dhammaadka qarniga 16aad.
Waa maxay farqiga u dhexeeya gander duurjoogta ah iyo crane kaynta?
Habitat: kaynta iyo beerrada.
Muuqaal: midabada jilicsan ee caleemaha ayaa badanaa guduudan iyo guduud, iyo midabada dhoobada - buluug iyo buluug-guduud.
Peduncles ee germanyum duurjoogta ah ayaa ka soo baxaya, iyo cawska hoos u dhicin.
Geranium jimcaha wuxuu jecel yahay ciidda qoyan iyo meelo yar oo soo ifbaxaya oo ka baxsan geraniums.
Geranium cagaaran wuxuu ka sareeyaa kaynta wax soo saarka sida geedka malab.
Wild geraniums waa dhirta malab wanaagsan.. In dabeecadda, inta badan waxaan la kulannaa geraniums, labada kaynta iyo cawska. Waxay u egyihiin marka hore marka la eego, wayna ku adkaan doontaa qof aan la aqoon inuu kala saaro.
On territory ee Russia waxaa laga heli karaa ilaa 40 noocyada geraniums. Geraniums on beerta iyo sirqoollada guryaha yihiin cadaalad ah si ay u sii joogteeyaan haddii hantida ciidda iyo heerka iftiiminta waxaa lagu hayaa, sida duurka.
Sababtoo ah noocyada kala duwan ee midabyada, milkiilaha jilicsan wuxuu abuuri karaa habeyn ubax ah oo dhadhankaaga.
Noocyada ugu caansan ee geraniums waa:
Ubaxyada Terry ee fasal beerta Xilliga xagaaga Skayz waxay leeyihiin midab casaan leh. Kala duwan Tani waxaa lagu kala soocay by dheer, qaabeynta muuqaalka, marka la beerto sariirta ubax, waxaa lagula talinayaa inay ku beeri on asalka ah, ka dib markii ubax, waxaa haboon in la gooyaa geedka gebi ahaanba.
Haddii ay jirto rabitaan ah in lagu hagaajiyo goobta iyo dhirta warshad leh caleenta madow, markaa si fudud ayaad u iibsan kartaa jilicsanaanta Black Beauty, waxay noqon doontaa mid ku habboon nidaamka ubaxa hore ee beerta.
Goosashada ganacsiga malabku waxay bixin kartaa geranium cagaaran, malab ka soo jinsiga ah waa guduud mugdi ah, oo leh caraf udgoon leh iyo dhadhan dabacsan.
Sawir ah warshad beereed
Tani waa waxa geranium duurjoog ahi u eg yahay sawirka.
Geranium waa mid aan qabin dabeecadda, abaarta u adkaysata. Geranium wuxuu noqon karaa meel leh saacad wareega, iftiin ama hooseeya.
Dooro aalado wanaagsan oo ciid ah, ka dibna geraniums si sahlan ayaa loo qaadaa xididka.
Sida waraabinta, warshadani ma jeclaan doonto marka xididdadu ay ku jiraan carrada xad-dhaafka ah, sidaas darteed waxa ugu muhiimsan ee arrintani waxay noqon doontaa dareenka saamiga.
Qalajinta kharashka geranium guga hore ka dib dhammaadka dhaxan. Ciidda ka hor beerashada waa in la daboolaa ama la xiiraa.
Dooro meel ku haboon.
Soo qaado waqtiga saxda ah.
Diyaarso sariir: digo dhulka 30-40 cm qoto dheer isticmaalaya bacriminta qaabka compost.
Joogso masaafada u dhexaysa geedo laga bilaabo 20 ilaa 65 cm.
Samee nasasho ee ubaxa.
Ku rid seedling daloolka, ku dabool dhulka iyo in yar oo dhulka ku dhuujiyo gacantaada.
Biyaha warshad isla markiiba ka dib beerashada.
Waraabinta. Inkastoo dareenka daacadnimada ah ee geedka yaryar ee abaarta, waxaa lagu talinayaa in lala socdo waraabinta warshadda, si looga hortago joojinta biyaha ee ciidda.
Bacriminta.Dhammaan gu'ga waa lagama maarmaan in la bacrimiyo dhulka, oo lagu kobciyo macdanta, taas oo saameyn ku leh koritaanka iyo ubaxa dhirta.
Geedo. Horumarka wax ku oolka ah iyo midhaha leh, waxaad u baahan tahay inaad ubax ka ilaaliso xaafadda oo leh caws.
Gooyo. Ka dib markii ubax iyo ubaxyo leh ubaxyo u baahan yihiin in laga saaro, isla waa in la sameeyaa oo la qalajiyo afkoda si loogu oggolaado caleemo cusub inay u koraan iyo si ay uga farxiyaan daawadayaashooda muuqaalkooda.
Kala bedelka. Ka dib 3-4 sano ka dib, germanyum ee goobta waxay qaadan doontaa meel aad u ballaaran, guga hore waxaad u baahan doontaa inaad beerista dhirta, u qaybiso qaybo badan.
Daryeelka la midka ah ee loo baahan yahay waxaa loogu baahan yahay qolalka qolalka guriga.
Inta badan, cudurada geranium waxaa lagu xiriiriyaa qaladaadka dayactirka warshadda, cudurrada caadiga ah waxaa ka mid ah:
Root kallana. Marka la eego cudurka fungal, xarun of kallana xidid ah u muuqdaan, kuwaas oo si tartiib tartiib ah ku faafay dhan rhizome. Bloom cad ama ubax ayaa ka muuqda dhirta, si toos ah u egtahay shabakad.
Botrutis muuska. Goobaha waxaa lagu daboolay aagag midabkiisu midabkiisu yahay midab, dhirku wuxuu noqdaa mid jilicsan, qaybo dhiman oo ah foomka funniga-qaabeeya muuqaalka caleemaha. Sababta cudurku waa qoyaan xad dhaaf ah.
Cudurka bakteeriyada. Wakiilka keena microbes.
Cidhifyada caleemaha waxay bilaabaan inay qalalaan, dhibco waxaa laga helaa taarikada caleen. Heerka ugu sarreeya ee jimicsiga ayaa hoos u dhacaya.
Cudurka Viral. Hawlaha fayruska ayaa si kala duwan u saameeya, calaamadaha dibadda waa kuwo badan, waa mugdiga ah caleemaha dhibcaha, iyo jaahwareerka geedka, iyo xiritaanka koritaanka.
Barar. On warshad muuqan goobooyin buuxiyey dareeraha, meelahaas ka dib markii ay bilaabaan inay noqdaan brown. Tani waxay keenaysaa hurdi iyo caleemo dhicid iyo ubax. Sababta waa qoyaan xad dhaaf ah iyo heerkulka hooseeya.
Si looga hortago dhibaatooyinka horumarinta iyo koritaanka germanyum, sida dhirta kale, ka hortagga waa muhiim.
Daaweyn, waxaad u baahan tahay inaad abuurto jawi ugu wanaagsan., ka saar meelaha ay saameeyeen dhirta, si caadi ah u ciidda, iftiinka, waraabinta, abuuro dheecaan tayo leh, qaado bacriminta si dhab ah iyo doorasho.
Cayayaanka ugu caansan ee geraniums waa caddaan, caarada caarada iyo aphids. Waxay u muuqan karaan hawo aad u qallalan.
In dagaalka ka dhanka ah cayayaanka sida ugu habboon waa cayayaankaKahor intaan la codsanin, waxaa lagama maarmaan ah in si fiican loo dhaqo germanyum biyo socda.
Daawada la hagaajiyey ayaa loo tixgeliyaa inay noqoto asbiriin, hal kiniin ayaa lagu qasi karaa 8 litir oo biyo ah iyo buufin dhirta, ku celi hannaanka ka dib saddex toddobaad.
Dareerinta geedka geraniums waxay ku dhici kartaa abuur, caleemo, gooyn, iyada oo qaybinaysa baadiyaha inta lagu guda jiro qotimid.
Marka loo baahan yahay in tallaalka loo baahan yahay si loo kala qaybiyo baadiyaha qaybo, tani waxay noqon doontaa qaab habboon oo dhalmo ah. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa inaad samayso manjooyin.
By abuurista abuurka, geranium ma aha mid aad u soo jiidashada ubax growers, iyo habkani waa mid caan ah. Xaaladdan oo kale, ciidda waa in ay ka kooban tahay ciid iyo humus oo dabacsan.
Laba toddobaad ka hor dhalashada qorshaysan, caleemaha waa in la sameeyaa dhererka oo dhan dhirta wareega wareega. Kadib kala goynta baadiyaha weyn, geedi socodkani si fiican ayuu u shaqeeyaa wuxuuna qaataa xidid.
Geranium ayaa si fiican u jilciya marka la xoqo. Xaaladda ugu weyni waa heer aad u sarreeya iyo heerkul sarreeya. Nidaamkan waxaa la sameeyaa labadaba xilliga guga iyo dayrta. Waa in lagu sameeyaa si siman iyo manjooyin. Nidaamka asaasiga ah ee gooyn ah inta lagu guda jiro beeritaanka waxaa la sameeyay iyada oo aan wax dhibaato ah.
Wixii ubax buuxa waa in loo isticmaalaa sida potassium bacriminta.
Iyadoo ay daryeeli karaan geranium, waxaa habboon in ay diidaan in ay ku buufiyaan oo ay si cad u qoyaan hawada.
Mahadcelinta ugu wanaagsan ee aad jeceshahay dhirta aad jeceshahay waxay noqon doontaa daryeel habboon iyo jiilaal si fiican loo abaabulo.
Geranium waxaa laga qodi karaa dhul furan oo xididdada ka xiran heerkul ah +7 +15 degrees Celsius. Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la qoyo xididada, la socoshada xaaladda geedka.
Iyadoo ay jirto kaydka taxadar leh xilliga qaboobaha, geranium wuxuu noolaan karaa heerkul hooseeya, oo ku haray dhulka. Wax waliba waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ee jarmalka.
Geranium waxaa ku jira waxyaabo badan oo faa'iido leh., taas oo u oggolaaneysa in ay isticmaasho cawska iyo xididdada sida dawo sida suuxin, wakiilka hemostatic, antibacterial.
Waxay leedahay muuqaal quruxsan oo muuqaal ah, oo aan culays saarin ninkii beerta ka shaqaynayay ee daryeel iyo dayactir guriga dhexdiisa, iyada oo ku faraxsan aragtida, nadiifinta hawada, oo ka qaado tamar wanaagsan.